FAQs – Entry Management System
ဝင်ထွက်စောင့်ကြည့်မှတ်သားပေးသည့်စနစ် (EMS) သည် ခြေရာခံဆက်သွယ်ရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်စနစ်အတွင်းစာရင်းသွင်းထားသည့်အမည်များ၊မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်အလုပ်ခွင်များ၊အများပြည်သူပိုင်နေရာများ၊COVID-19ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားသည့်နေရာဒေသများတွင်တစ်ဦးချင်းစီ​၏ကိုယ်အပူချိန် တိုင်းတာချက်များကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့်စစ်ဆေးမှတ်တမ်းတင်၍သိမ်းဆည်းပေးသောစနစ်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်
EMS စနစ်ကို သတ်မှတ်နေရာတွင်ထားရှိသော QR ကုတ်ကို စကန်ဖတ်ခြင်းဖြင့် အဝင်/အထွက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့် စိစစ်အတည်ပြုခြင်း တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
မည်သည့်နေရာများတွင် EMS စနစ်အား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသလဲ?
အနီးကပ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးရသောနေရာများ၊ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးရသောနေရာများ (သို့မဟုတ်)လူစည်ကားသောနေရာများတွင် EMS စနစ်မဖြစ်မနေအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ EMS စနစ် ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုရန် တိုက်တွန်းထားသည့်နေရာများ:
လုပ်ငန်းခွင် (ရုံးများ၊ စက်ရုံများ)
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (ဆေးရုံများ၊ ဆေးခန်းများ)
ဒေသဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ (ဘိုးဘွားရိပ်သာများ)
ဆံသဆရာများ၊ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်များနှင့် အလှပြင်ဆိုင်များ
လူသွားလူလာ များသော အသားစိမ်း၊ ငါးစိမ်း ရောင်းချသည့် စျေးများ
ဟိုတယ်များ၊ အသေးစားဟိုတယ် အင်းများနှင့် အပန်းဖြေ ရိပ်သာများ
ခရီးသွားအများစု နှစ်သက်သည့် ဆွဲဆောင်ဖွယ် နေရာများ
သိုလှောင်လွှဲပြောင်းခြင်း နှင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ( ဂိုဒေါင်များ၊ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများနှင့် ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်များ)
အလျဥ်းသင့်သလို လမ်းပေါ်ပြေးဆွဲနေသော အဌားကားတက္ကစီများအား ခြေရာခံ ဆက်သွယ်နိုင်သည်အထိ EMS စနစ်သည် အဆင့်ဆင့်အထောက်အကူပြုပါသည် တက္ကစီကားမောင်းသူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကားအလိုက် EMS စနစ်တွင် မှတ်ပုံတင်သွင်း၍ကိုယ်ပိုင် QR ကုတ် ဖန်တီးထားပါက စီးနှင်သောခရီးသည်များအား ခြေရာခံဆက်သွယ်နိုင်သည် ပုံမှန်အဌားကားဖြင့် အလုပ်ဆင်းသူများအနေဖြင့်လည်း EMS QR ကုတ်စနစ်ကို စကန်ဖတ်၍ တက္ကစီ စီးရာတွင် ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုသင့်သည်
အချိန်ကြာမြင့်စွာဝန်ဆောင်မှုပေးစရာမလိုသည့်လက်လီရောင်းချသည့် ဆေးဆိုင်များ အချိန်မရွေးဝယ်ယူနိုင်သောကုန်မျိုးစုံဆိုင်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရောင်းချသောဆိုင်များ အနေဖြင့်လည်း ဝယ်ယူသူများအတွက် EMSစနစ် အားကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စီမံချက်အဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အကြံပြုတိုက်တွန်း လိုပါသည်
စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အဖျော်ယမကာဆိုင်များ(လက်ရှိတွင်အိမ်အရောက် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပါဆယ်ဝယ်ယူစားသောက်မှုအတွက်သာ)ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆိုင်များ အနေဖြင့်စားသုံးသူများအားဆိုင်အတွင်းဝင်ရောက်စားသောက်ခွင့် ခွင့်ပြုမထားသေးပါကEMS စနစ် မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရန်မလိုအပ်သေးပါ သို့ရာတွင်လက်လီရောင်းချသောဆိုင်နှင့်အဖျော်ယမကာဆိုင်များအနေဖြင့် အခြားသောလုပ်ငန်းခွင်များကဲ့သို့ ဝန်ထမ်းများအတွက် EMSစနစ် မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စိတ်ချရသော အကွာအဝေး အနေအထား၊ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုစသော စိတ်ချလုံခြုံသော စီမံခန့်ခွဲမှုများဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးရမည်ဖြစ်သည်
EMS စနစ်မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရမည့်နေရာများ၊ ပိုမိုသော အစီအစဉ်အသစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးတို့အတွက် ဖော်ပြထားသော လင့်ခ်အတွင်းတွင် စဥ်ဆက်မပြတ် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြပေးသွားပါမည်
ဘာကြောင့် EMS စနစ်ကို နေရာပေါင်းများစွာသို့ တိုးချဲ့ဖြန့်ဝေဖို့ လိုအပ်တာပါလဲ?
အသွားအလာ ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားသောကာလအပိုင်းအခြားများပြီးနောက် လုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဆိုင်ရာများ တဖြည်းဖြည်း ပြန်လည် လည်ပတ်လာသည်နှင့်အမျှ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ခြေရာခံ ​ဆက်သွယ်ခြင်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသော ဝန်းကျင်တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီး ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည် EMS စနစ်သည် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာနေရာများရှိ တစ်ဦးချင်းစီ၏ အဝင်/ အထွက် ကို စိစစ်မှတ်တမ်းတင်ပေးထားခြင်းဖြင့် ခြေရာခံဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို ပိုမိုလွယ်ကူလာစေပါသည် EMS စနစ်အတွင်းရှိ တစ်ဦးချင်းစီ၏ အဝင်/အထွက် မှတ်တမ်းများသည် COVID-19 ရောဂါပိုးအတည်ပြုလူနာများနှင့်အနီးကပ်ထိတွေ့ထားသူများကို ခြေရာခံရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန်စေပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဥ်သွားလာလှုပ်ရှားမှုများနှင့် နေ့စဥ်လူနေမှုဘဝများ ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အသွားအလာကန့်သတ်မှုများလျော့နည်းလာစေရေး အတွက် ခြေရာခံဆက်သွယ်ဖော်ထုတ်ရေးစနစ်သည် အရေးကြီးပါသည်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် EMS စနစ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက်မည်ကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်သွင်းရပါသလဲ?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ဖော်ပြပါ လင့်ခ်အတွင်းဝင်ရောက်၍ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေရာများသည် အဝင်/ အထွက် နှစ်မျိုးလုံးကို မဖြစ်မနေ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်လား?
သက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ ဝင်ပေါက်ဝ တစ်ခုတည်းအတွက်သာ EMS စနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း မဖြစ်မနေပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည် လုပ်ငန်းခွင်များအနေဖြင့်လည်း အဆိုပါနည်းလမ်း အတိုင်းကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်နိုင် ပါသည်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် EMS စနစ်တွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီ၏ တည်နေရာတိုင်း အတွက် သီးသန့်သတ်မှတ်ပေးထားသော QR ကုတ်တစ်ခု လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးမပြုသော ပြင်ပဧည့်သည်များ အတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင် ဝင်ပေါက်ဝများရှိတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ၏ ဖုန်းများမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသူများအား စကန်ဖတ်ယူစေကာ အသေးစိတ် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များစနစ်အတွင်း ဖြည့်သွင်းပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေး ရပါမည်
EMS စနစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေ အသုံးပြုခြင်းသည်အချို့သောအချိန်ကာလများအတွင်း လူစည်ကားရာနေရာများတွင် လူအများပြည့်ကျပ်မှုကို သိသိသာသာဖြစ်ပေါ် စေပါသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေရာများသည် ဤကာလအတွင်း EMS စနစ်အသုံးပြုခြင်း ကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားနိုင်ပါသလား?
အထူးသဖြင့် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားသည့် အချိန်ကာလများတွင် ခြေရာခံ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်သည့် အချက်အလက်များအား EMS စနစ်အတွင်း သိမ်းဆည်း မှတ်တမ်းတင်ထားရန် အရေးကြီးပါသည် စီးပွားလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေရာများအနေဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီသည့် အစီအစဉ်များရေးဆွဲကာ EMS စနစ်အား ရေရှည်ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တွင် စမတ်ဖုန်းမရှိပါက ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံရပါမည်လား? ပြည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် အခြားသောနည်းလမ်းနှင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိ ပါမည်လား?
ဆက်စပ်နေရာများ၏ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက် များတွင် ဝန်ထမ်းများအား ခွဲဝေနေရာချထား၍QR ကုတ်များကို စကန်ဖတ်ရန် သင့်လျော်သည့်လက်ကိုင်ဖုန်းမရှိသော ပြင်ပဧည့်သည်များအတွက် သီးခြားမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်လုံး ထားရှိသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်
EMS စနစ်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံများ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း(သို့မဟုတ်) သတင်းအချက်အလက်များထပ်မံထည့်သွင်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား?
EMS စနစ်အတွင်း စုဆောင်းရရှိထားသော အချက်အလက်များအားလုံးသည် ခြေရာခံ ဆက်သွယ်ရာတွင်သာ အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံများ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း(သို့မဟုတ်) သတင်းအချက်အလက်များ ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်း ပြုလုပ်၍ရမည်မဟုတ်ပါ သို့ရာတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီတစ်စုံတစ်ရာ ရယူလိုပါက ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်၏ အဆောက်အဦးတွင် EMS စနစ် အသုံးပြုပြီးသားဖြစ်သည်(ဥပမာ- စျေးဝယ်ကုန်တိုက်) ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းသူများအနေဖြင့် အဆောက်အဦးအတွင်း EMS စနစ် မဖြစ်မနေ ထပ်မံ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသလာ:?
ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းသူများအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု ဖန်တီးရန် EMS စနစ်အားမဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည် ထို့ပြင် ဖော်ပြပါလင့်ခ်အတွင်းတွင် EMS စနစ်မဖြစ်မနေအသုံးပြုရမည့်နေရာများ အလိုက် စာရင်းပြုစုပေးထား https://entrymanagementsystemems.com/deployment/ ပါသည်။ ကုန်တိုက်အတွင်းရှိ စျေးဆိုင်ခန်းများ (သို့မဟုတ်)ဆံသဆရာများသည် ဆိုင်သို့လာရောက်သော စျေးဝယ်သူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရသူများအတွက်EMS စနစ် မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်
EMS စနစ် စတင်အသုံးပြုနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆက်စပ်နေရာများ၏ အဆောက်အအုံအတွင်း အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် ဝင်ရောက်ရသူများ (ဥပမာ SCDF လူနာတင်ယာဥ်ဝန်ထမ်းများ၊ မီးသတ်သမားများ) အနေဖြင့် EMS စနစ်အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသလား?
ပြင်းထန်သော အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် အချိန်မီဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါက EMS စနစ်အား အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပါ
လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော ရောင်းချသူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အစားEMS စနစ်အား ဘာကြောင့် အသုံးပြုဖို့လိုအပ်တာပါလဲ?
EMSစနစ် မဖြစ်မနေအသုံးပြုရန် လိုအပ်လာရခြင်းမှာ အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်း အားလုံး၏ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အစိုးရအာဏာပိုင်များ အနေဖြင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ခြေရာခံဆက်သွယ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်စေခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည် EMS စနစ်သည် COVID-19 ရောဂါပိုးအတည်ပြုလူနာများနှင့် အနီးကပ် ထိတွေ့ထားသော ပြင်ပမှ ဧည့်သည်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ သက်ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကို ဒေါင်းလော့ခ်ပြုလုပ်ကာ အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ပေးပို့၍ ခြေရာခံ ရှာဖွေဖော်ထုတ်စေပါသည် EMS စနစ်မှ ကောက်ယူသိမ်းဆည်းထားသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ ခြေရာခံ ဆက်သွယ်ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ရေးအတွက်သာတရားဝင်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီး အချက်အလက် များကို အစိုးရ၏ သတ်မှတ်ထားသော လုံခြုံရေးစံနှုန်းနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေး သွားမည်ဖြစ်သည်
EMS စနစ်တွင် ခရီးသွားရာဇဝင်နှင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက် တစ်စုံတစ်ရာထည့်သွင်း အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသလား?
လိုအပ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေရာများရှိ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် EMS စနစ်တွင် ခရီးသွားရာဇဝင်နှင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်တစ်စုံတစ်ရာ ထည့်သွင်းအတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်
ကျွန်ုပ်သည် ပြင်ပဧည့်သည်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသုံးပြုလျက် ရှိပါသည်။ထိုအရာကို EMS စနစ် နှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလို့ ရပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အခြားသောနည်းစနစ်များနှင့်EMS စနစ် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှုကို ယခုအချိန်တွင်ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း မပြုသေးပါ
EMS စနစ် ချို့ယွင်းပါက ဘာဆက်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ?EMS စနစ်တွင် အလွယ်တကူ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါသလား?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် EMS စနစ်ချို့ယွင်းနိုင်သည့် အခြေအနေအရပ်ရပ်အတွက် နေ့စဉ် ကောက်ယူရရှိသော အချက်အလက်များကိုဒေါင်းလော့ခ်ပြုလုပ်ကာ ကွန်ပျူတာထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားခြင်း စသည့် နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်
EMS စနစ်အသုံးပြုရန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည့်နေရာများ ရှိပါသလား?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဆက်စပ်နေရာများတွင်EMS စနစ် ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုသင့်ပါသည် (ဥပမာ- ရုံးများ၊ စက်ရုံများ၊ ကုန်တိုက်များနှင့် စျေးဝယ်စင်တာများ)
ယာယီလူစုလူဝေးရှိသည့်နေရာများ (ဘူတာရုံများနှင့်ပန်းခြံများ)တွင် QR ကုတ်များ ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီးခြေရာခံဆက်သွယ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးအတွက် ပြည်သူများကပါ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်စေရန် တိုက်တွန်းကြိုးပမ်းရပါမည်
EMS စနစ် အသုံးပြုမှုကို ကြီးကြပ်ရန် ဝန်ထမ်းများ လိုအပ်ပါသလား?
EMS စနစ်အသုံးပြုရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံ ဝင်ပေါက်ဝတွင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာချက်များအား စကန်ဖတ်ယူရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန် အများအားဖြင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသာ ကြီးကြပ်ရန် လိုအပ်သည်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလိုက် သက်ဆိုင်ရာ သီးခြားQR ကုတ် ကို ဆက်စပ်နေရာ များတွင်ထားရှိ၍ စကန်ဖတ်ယူစေခြင်းဖြင့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အဝင်အထွက်ကို စစ်ဆေးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါသည် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အပြင်လူများ မဝင်ရောက်မီတစ်ဦးချင်းစီ၏ အသေးစိတ် ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များနှင့် ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာချက်များအား EMS စနစ်တွင် ကြိုတင်ထည့်သွင်းအတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်
Caspian Digital Solutions သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမည်လား?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် ဖော်ပြပါ လင့်ခ်အတွင်းဝင်ရောက်၍ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည် https://entrymanagementsystemems.com/contact-us/
အများပြည်သူသုံး ဘတ်စ်ကားများ၊ အငှားကားတက္ကစီများ စီးနှင်သော ခရီးသည်အားလုံး QRကုတ် စကန်ဖတ်ရမည်လား?
ခရီးသည်များသည် ဘတ်စ်ကားများ၊ အဌားကားတက္ကစီများ မစီးနှင်မီ လူမှုရေးတာဝန်အသိဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ယာဥ်ပေါ်တွင် ပါရှိသော QR ကုတ်အလိုက် စကန်ဖတ်၍ EMS စနစ်တွင် စာရင်းသွင်းသင့်ပါသည် ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် QR ကုတ်များ စကန်ဖတ်ရန် ဆန္ဒမရှိသော ခရီးသည်များအား လိုက်ပါစီးနင်းခွင့်မပြုဟု ယဉ်ကျေးစွာငြင်းပယ်နိုင်သည်
ဖုန်းဘွတ်ကင်စနစ်ဖြင့်ငှားရမ်းခြင်းနှင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှငှားရမ်းခြင်းများအတွက် QR ကုတ် စကန်ဖတ်ရန်လိုအပ်ပါသလား?
မလိုအပ်ပါ။ တက္ကစီဌားရမ်းခြင်းပြုလုပ်နိုင်သော အက်ပလီကေးရှင်း (သို့မဟုတ်) သတ်မှတ်ထားသောတက္ကစီငှားရမ်းနိုင်သည့်နေရာမှ စီးနှင်သော ခရီးသည်များထံမှ အခြားသောခြေရာခံဆက်သွယ်နိုင်သည့် အချက်အလက်များရရှိပြီးဖြစ်သဖြင့် အလားတူ QR ကုတ်စကန်ဖတ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များအားမည်သို့ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးပါမည်လဲ?
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား သတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်ထိန်းသိမ်းရေးစံနှုန်းများနှင့်အညီ ပေါက်ကြားမှုမရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးသွားမည် အချက်အလက်များအားလုံးကို လျှို့ဝှက်ပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး ခြေရာခံဆက်သွယ် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးအတွက်သာ တရားဝင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ကာကွယ်ရေး ဥပဒေအရ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းပေးသွားမည်
တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်မပြောဆိုချင်သည့်အခါ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါသလား?
(အမည်၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် နှင့် ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာချက်) တို့သည်မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းရမည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည်
အစိုးရအနေဖြင့် အချက်အလက်များအားလုံးကို အသုံးပြုခွင့်ရှိပါသလား? မည်သည့်အတွက်ကြောင့်အချက်အလက်များအား အသုံးပြုတာပါလဲ?
EMS စနစ်ဖြင့် ကောက်ယူရရှိထားသော အချက်အလက်များကို ဆာဗာထဲတွင် စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်ပြီး ခြေရာခံဆက်သွယ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ်သည့်အခါမှသာ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ တရားဝင် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်သည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ထားသော လုံခြုံရေးအဆင့်နှင့်အညီ လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းပေးသွားမည် ခြေရာခံဆက်သွယ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ရှိသူများမှ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေး၍ လိုအပ်သည်များ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်
ခြေရာခံဆက်သွယ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန်စေရန် အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းများသည်ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကို မည်သို့သော အခြေအနေများအတွက် ထုတ်ပြန်သွားမည်နည်း?
ခြေရာခံဆက်သွယ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် မဖြစ်မနေ သီးခြားလိုအပ်လာသည့် အခြေအနေမျိုးတွင်သာအချက်အလက်များအား သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များမှ တရားဝင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်
EMS စနစ်အသုံးပြုရာတွင် အချက်အလက်များလုံခြုံရေးအတွက် လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်း ထားရှိမည်လား?
EMS စနစ်ဖြင့် ကောက်ယူရရှိထားသော အချက်အလက်များအားလုံးကို ဆာဗာထဲတွင် အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးစနစ်ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် သိမ်းဆည်းထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ခြေရာခံဆက်သွယ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ်သည့်အခါမှသာသက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ရှိသူများက အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည် ခြေရာခံဆက်သွယ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါမှသာ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း၏တာဝန်ရှိသူများမှ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်
သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ခြေရာခံဆက်သွယ်ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ရေး တစ်ခုတည်းအတွက်သာ သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည် ထို့ပြင် အချက်အလက်များအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ရှိသူများသာလျှင် ရယူအသုံးပြုနိုင်သည် ခြေရာခံဆက်သွယ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် မလိုအပ်တော့သည့်နောက်ပိုင်းတွင် သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက်များကို ဖယ်ရှားပယ်ဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်၏ အချက်အလက်များကို EMS စနစ်တွင် ထည့်သွင်းအတည်ပြုပြီးနောက် ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသလား?
မူပိုင်ခွင့်အားလုံးကို Caspian Digital Solutions မှ ၂၀၂၀ တွင် ရယူပြီးဖြစ်သည်
English	 Bahasa Malaysia	 简体中文	 Bahasa Indonesia	 தமிழ்	 ဗမာစာ